Domaines sy Topo Alasora: Nakatona taorian’ny nahitana tranga Covid-19
samedi, 23 mai 2020 15:59
« Ho fiarovana ny fahasalaman’ny besinimaro dia miato ny asa sy ny fandraisana olona eto amin’ny sampandraharaha iombonan’ny fananantany sy ny fandrefesantany ary ny fanajariana ny tany ». Ampahany amin’ny petadrindrina hita eo ambavahadin’ny biraon’ny Domaines sy Topo Alasora Avaradrano io.
Niverina nandray olona ny sampandraharaha iombonan’ny fananantany sy ny fandrefesantany ary ny fanajariana ny tany teto Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano ary Ambohidratrimo nanomboka ny alatsinainy 18 may 2020 teo. Nisy olona naka « Certificat de situation juridique » tao Avaradrano ny alatsinainy 18 may 2020 io ; voamarina anefa fa voan'ny Covid-19 izy io ny talata 19 may 2020.
Noho io tranga io dia nakatona avy hatrany sady tsy misy miasa no tsy mandray olona ny Domaines sy Topo Alasora, nanomboka ny alarobia 20 may 2020.
Efa tsaboina eny amin’ny CHU Anosiala ilay nanan-draharaha tao voamarina fa voan'ny Covid-19. Etsy ankilany, mitaintaina ny mpiasa ao te hahalala ny toe-pahasalamany nefa hatreto tsy nisy nanao fitiliana, no samy nody any amin'ny fianakaviany avy, fa nasaina miantso ny 913 izay mahatsapa ny fitrangan'aretina.